Eden Hazard oo markii ugu horreysay ka hadlay dhoola-caddeyntii hadal-heynta abuurtay ee ciyaartii Chelsea vs Real Madrid – Gool FM
(Madrid) 13 Juun 2021. Marka laga soo tago hoo-u-dhaca ku yimid qaab ciyaareedkiisa iy dhaawacyada ragaadiyay bandhiggiisa, waxaa dhammaadka xilli ciyaareedkan soo jeediyay dareenka dadka Eden Hazard kaasoo la arkay isagoo qosol iyo qaraaxo la wadaagaya qaar ka mid ah xiddigaha Chelsea kaddib markii ay dhammaatay ciyaartii kooxdiisa Real Madrid loogaga reebay tartanka Champions League.
Laacibkan ayaa qiray inay qalad ahayd in xilligaas uu muujiyo muuqaal dhaawacaya damiirka taageerayaasha Madrid markii uu kaftan iyo qosol la wadaagay Kurt Zouma iyo Edouard Mendy daqiiqado kaddib markii kooxdiisa laga reebay tartanka horyaallada Yurub ciyaar ka tirsaneyd wareegga nus-dhammaadka oo ka dhacday garoonka Stamford Bridge.
“Taas qalad ayay ahayd” ayuu u sheegay Het Nieuwsblad.
“Waxa ay Mendy iyo Zouma sheegeen ma ahan wax lagu qoslo, balse waxaan lasoo ciyaaray Zouma, waanna aqaannay Mendy, sidaas darteed, marwalba aad la kulanto saaxiibbadii aad taqaannay waa iska madaddaalo.
“Waan ogahay inaan dhaawacay sawirka Real Madrid, qof walbana waxa uu ii qaatay inaan dhaawac dareemin (natiijada awgeed), balse taas runta wey ka fogtahay, waan niyad jabsanaa, haddii ay jirto ciyaar aan rabay inaan guuleysto waxay ahayd tan aan ka hor tagay kooxdeydii hore” ayuu hadalkiisa kusii daray laacibka Belgium.
Hazard ayaa ka tirsanaa Chelsea intii u dhexeysay 2012 illaa 2019 kahor inta uusan kusoo biirin Real Madrid, waxaana uu kooxdiisa hore wajahay wareeggii nus-dhammaadkii Champions League ee 2020-21 iyadoo Blues ay tartanka ka reebtay Los Blancos kulan wadar ahaan ay kusoo gudubtay 3-1, balse hadal-heynta waxaa qabsaday 30-jirkan kaddib markii uu muujiyay dareen qosol leh iyadoo kooxdiisa ay ka niyad-jabsan tahay natiijadii ciyaarta.
Horudhac: Netherlands vs Ukraine... (Holland oo markii ugu horreysay tartan weyn ciyaareysa tan iyo 2014 & xiddig muhiim ah oo shaki laga gelinayo)